Rental Mobil Malang di NAYFA Trans Ukuba ubukhe wakha baqesha imoto ube mhlawumbi uqhelene izinga enamaphiko olukhulu, ukuze into engaqhelekanga apho izityholo ezingalindelekanga bafumane yongezwe kwityala wakho ngomzuzu wokugqibela. Nacinga imoto wayesiya malini oko wathi kwiwebhusayithi, kodwa enye ibali xa ngaphambili ukuya counter irente. baya iindleko inkulu engalindelekanga kuba imveliso ukuncitshiswa ingaphezulu singafundiswa yi-arhente eziqeshisayo imoto njengendlela ukunciphisa imfanelo yakho xa kukho umonakalo imoto. Ngoko kukho umbuzo wokuba okunene uyifuna.
Kunokuba umntu onobunzima ukuphendula xa kukho ufolo lwe ngumonde iholide-abenzi ndilinde emva kwakho kwi-counter irente. Njengoko ngonaphakade, ihlabathi inshorensi umvuzo imoto intsonkothile, ezididayo zizaliswe kunye neenkcukacha ezincinane lwenkohliso. Xa u hlawula ku ukunciphisa imfanelo yakho, zipapashiweyo izinga ngemihla unako phantse kabini. Ukuba baqeshe imoto kuqoqosho esisiseko in Melbourne kangangeveki uya okhangeleka ukuhlawula ukusuka Avis $ 34,40 ngosuku, kodwa ukunciphisa abangaphezu yakho esuka $ 3017 ukuya $ 342, uya kuba slugged ezongezelelweyo kwi $ 24 ngosuku. Rental Mobil Malang di NAYFA Trans
Rental Mobil Malang di NAYFA Trans Kuba umthengi sitshutshiswa ngubani akafuni kusala enyanyeni, ixabiso emotweni wahamba kanye ukusuka $ 34 ukuya $ 58 ngosuku - yonke ezimbini minutes.One ishishini umthombo wasixelela ukuba iimveliso zokunciphisa kweliqingqiweyo apho iinkampani irente imoto ukwenza ezininzi imali yabo. I sithethi Europcar wakhanyela oku, ngoxa isithethi Hertz wavuma ukuba "iingeniso encedisayo" negalelo imbuyekezo oluzinzileyo. Yiyiphi eyona ndlela ibubulumko ukunciphisa kwakuwo umvuzo imoto?
Iindaba ezimnandi kukuba kukho iindlela ezingcono ukunciphisa imfanelo yakho kwemfuneko ngaphezu iimveliso uxinzelelo-intengiso ngoba kuwe ziinkampani umvuzo imoto. iimveliso ezininzi inshorensi ezinye zitshiphu kwaye ezingafakwanga ezimbalwa. Kodwa ukuze kuba lula. Ukuba wenza awonakalise imoto yakho irenti, kusenokufuneka ahlawule inkampani unonophelo umvuzo ngenxa yomonakalo uze ibango ndibabuyise inshorensi yakho oyikhethileyo. Thina Ndicinga ukuba ixabiso elincinane ukuhlawula yokwazi oko uzifaka engaphambili kwaye iintlawulo zanyanga le ephantsi. Rental Mobil Malang di NAYFA Trans
Created at 2017-01-06 12:00